Masoivoho Alema : Tsy manaiky ny fanonganam-panjakana -
AccueilSongandinaMasoivoho Alema : Tsy manaiky ny fanonganam-panjakana
Masoivoho Alema : Tsy manaiky ny fanonganam-panjakana
Manoloana ny toe-draharaha mafampana miseho eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao, di naneho hevitra ihany koa ny Masoivoho Alema, Harald Gerhig ka nilaza fa tsy manaiky ny fanonganam-panjakana izay kasaina ataon’ireo depiote ho an’ny fanovana miisa 73. Amin’ny fomba maro no nambarany no azo hamahana ny olana amin’izao fotoana izao, ary ny lehibe indrindra amin’izany ny firesahana an-dabatra boribory, satria ny samy Malagasy ihany no efa mahavaha ny olana miseho amin’izao fotoana izao. Na dia eo aza anefa izany, dia vonona ny hanome soso-kevitra ny firenena Alemana raha ilaina izany amin’ny famahana ny olana. “Tsy manana vahaolana omena izahay fa anjaran’ny Malagasy samy Malagasy no mitady vahaolana amin’izao tranga-javatra izao. Fa raha mila soso-kevitra kosa indray dia eto izahay vonona hanolotra izany, noho ny traikefa ananan’ny Alemana. Manohitra tanteraka ary tsy manaiky ny fanonganam-panjakana, na amin’ny endriny inona, na amin’ny endriny inona kosa ny firenena Alemana satria tsy mitondra voka-tsoa. An-dabatra boribory ihany no ahitana ny vahaolana”, hoy i Harald Gerhig, Masoivoho Alema monina eto Madagasikara, omaly.
Notsidriany ihany koa fa tsy misy fiantraikany velively eo amin’ny fifandraisan’ny firenena Alemana sy Madagasikara ny toe-draharaha miseho eto amin’ity firenena ity. “Antenaiko fotsiny dia ao anatin’ny fanarahana ny lalàm-panorenana ity fitokanana ity. Tsy voakasik’io ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta, ary tsy misy fiantraikany izany. Mifanohitra amin’izay ary, satria eto foana izahay manohana ny namanay Malagasy”, hoy hatrany ity Masoivoho Alema ity. Notsipihany moa fa mila fifidianana mifandanja sy ampitoniana amin’ny faran’ny taona ny firenena malagasy. Mahakasika ny fiaraha-miasa amin’ny firenena Alemana izay hatrany, fantatra fa hankalazaina amin’ny 15 sy 16 mey izao ny faha-135 taona (15 mey 1883-15 mey 2018) ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin’ny firenena roa tonta. “135 taona fifanarahana fifampitoniana sy ara-barotra satria raha misy ny filaminana dia tonga ho azy ny fampandrosoana. Mba hisian’ny fampandrosoana anefa dia ilaina ny fitoniana. Marihina fa maro ny fiaraha-miasa amin’ny Alemana, ary mbola lehibe lavitra ny ho avy”, hoy ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Rabary Njaka Henri, omaly hatrany. Hisy ny fifanakalozan-kevitra hiresahana ny fiaraha-miasa efa nisy sy mbola ho avy entina hankalazana ny tsingerintaona. Eo koa ny hetsika ara-kolontsaina sy ara-tsiantifika , ary fampirantiana. Fankalazana izay eo ambany ny fiahian’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery.
Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana eto amin’ny firenena ataon’ny Fitondram-panjakana, tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Tafapetraka omaly, teny By-Pass mantsy ny vato fototra amin’ny fanombohana ny asa, izay tafiditra indrindra amin’ny tetikasa fanitarana an’Antananarivo na ilay ...Tohiny